विश्वमै एकमात्र कुसुण्डा भाषाका ज्ञाता ८२ वर्षीय ज्ञानीमैया कुसुण्डाको निधन – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/विश्वमै एकमात्र कुसुण्डा भाषाका ज्ञाता ८२ वर्षीय ज्ञानीमैया कुसुण्डाको निधन
विश्वमै एकमात्र कुसुण्डा भाषाका ज्ञाता ८२ वर्षीय ज्ञानीमैया कुसुण्डाको निधन
उहाँ विश्वकै एकमात्रै कुसुण्डा भाषा बोल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँको निधनसँगै कुसुण्डा भाषा संरक्षणमा चिन्ता थपिएको यस भाषाका अनुसन्धानकर्ता उदय आलेले जानकारी दिनुभयो । “विश्वमा उहाँमात्रै कुसुण्डा भाषा बोल्ने ब्यक्ति हुनुहुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “उहाँलाई हामीले कुसुण्डा भाषाको शब्दकोषका रुपमा समेत लिएका थियौँ, तर उहाँको निधनले कुसुण्डा भाषा संरक्षणमा चिन्ता थपिएको छ ।”
कुसुण्डा पुसको अन्तिम सातादेखि बिरामी पर्नुभएको थियो । उहाँको प्रारम्भिक उपचार लमहीस्थित फ्लोरेन्स अस्पतालमा गरिएको थियो भने थप उपचार कोहलपुर मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज लगिएको थियो । उहाँको अवस्था सुधार नभएपछि उहाँलाई घरमै राखिएको थियो । त्यही क्रममा आज उहाँको निधन भएको बुहारी आशा पुनमगरले बताउनुभयो । अब दाङको लमहीमा उहाँकी काकाकी छोरी कमला कुसुण्डाले मात्रै यो भाषा बोल्न जान्नुभएको छ ।
ज्ञानीमैयाका एक मात्र छोरा प्रेमबहादुरको छ वर्षअघि करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियोे । उहाँका दुई छोरीको विवाह भइसकेको छ । घरमा उहाँकी बुहारीले नै हेरचाह गर्दै आउनुभएको थियो ।कुसुन्डा विकास समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाका अनुसार दाङमा ९८ र देशभर २७३ जना कुसुन्डा छन् ।
मलमास शुरु, के गर्न हुन्छ के हुँदैन ?
सिन्धुपाल्चोकमा यात्रुबहाक बस दुर्घटना, १३ जनाको घट्नास्थलमै निधन, दर्जनौँ घाइते !
गृहले भन्यो- सूर्यग्रहणमा सार्वजनिक बिदा हुँदैन
दक्षिण कोरियामा फेरि एक नेपाली युवा गम्भीर बिरामी ! लाग्यो यस्तो रोग, सहयोगको अपेक्षा